Wasiirka Amniga ee Somaliya ‘Islow’ oo beeniyay in ciidamo dowladeed la dul dhigay hoyga Sheekh Shariif Sh. Axmed – HalQaran.com
Wasiirka Amniga ee Somaliya ‘Islow’ oo beeniyay in ciidamo dowladeed la dul dhigay hoyga Sheekh Shariif Sh. Axmed
by HalQaran Staff	 March 24, 2020 11 Views
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaalle
Muqdisho (Halqarna.com) – DF Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay warar maalmihii la soo dhaafay soo baxaayay oo sheegaayay Ciidamo dowladeed in la dul geeyay hoyga Shariif Sheekh Axmed uu ka dagan yahay magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ayaa barta ay ku leeyihiin xiriirka Bulshada ku soo qoraayay hadalo digniin ah oo ku aadan xiisad ka dhalan karta Ciidankaasi la sheegay in la dul geeyay hoyga Shariif Sheekh Axmed.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaalle ayaa qoraal uu soo dhigay Bartiisa xiriirka Bulshada Facebook, wuxuu ku beeniyay in wararkaasi ay yihiin mid been abuur ah.
Wasiir Islow ayaa uga digay Masuuliyiinta qaar ee dowladda Soomaaliya ku jira inay si qaldan dadka wax ugu sheegaan.
“Ma jiro ciidan dowladeed oo la dul dhigay ama weerar ku ah madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo naga wada mudan ixtiraam. Waxaan caddeynayaa in warkaasi yahay been abuur aan sal iyo raad lahayn oo ay wadaan dad ujeedkoodu yahay fitno iyo colaad abuur. Waxaan ugu baaqayaa Soomaalida iyo gaar ahaan dadka mas’uuliyiinta ah inay iska hubiyaan wararka ay bulshada la wadaagayaan ee keeni kara kicin colaad iyo Amni darro” Wasiirka Amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abukar Islow.
Si kastaba, hadal haynta la xiriirta Ciidan dowladeed in la dul geeyay guriga Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay aheyd mid isa soo tareysay muddooyinkii dambe, balse dowladda ay beenisay arrintaasi.
#Wasiir Islow oo beeniyay in hoyga Sheekh Shariif Ciidamo la dul dhigay
Previous Post DF Soomaaliya oo Garoonka Aadan Cadde ku gubtay Qaad si qarsoodi ah loo soo geliyay +(SAWIRRO)
Next Post Gudiga diyaarinta Xeerarka sharciga Doorashoyinka Qaranka oo maanta la magacaabay +(SAWIRRO)
James Swan oo farriin ku aadan COVID-19 u jeediyay madaxda DF Somaliya
by Weriye Ahmed Abdi	 March 31, 2020
DEG DEG: Al-Shabaab oo toogtay 6 nin oo ay basaasnimo ku eedeeyeen
Somalia, like many other countries in the world, is facing the unprecedented challenge of the…
President Farmajo welcomes decision by IMF to award Somalia debt relief
UN lauds Somalia on reaching debt relief under HIPC
Recurrent stand-off between FGS and Puntland over Federalism
by Halqaran	 March 25, 2020
Somali gov’t warns against hoax to target ex-president
Somalia receives COVID-19 testing kits
by HalQaran Staff	 March 24, 2020